फोनको ब्याट्री धेरैबेर टिक्दैन ? थाहा पाइराख्नुहोस् यी १० कारण - Tech News Nepal Tech News Nepal
शनिबार, मंसिर ६, २०७७ १४:४३
फोनको ब्याट्री धेरैबेर टिक्दैन ? थाहा पाइराख्नुहोस् यी १० कारण
काठमाडाैं । मोबाइल खरिद गर्दा ध्यान दिनुपर्ने एउटा कुरा ब्याट्री पनि हो । मोबाइलको ब्याट्रीलाई असर पार्ने विभिन्न कुराहरुको बारेमा आज हामी तपाईलाई बताउँदै छौं । ब्याट्रीलाई मोबाइलका हार्डवेयर तथा सफ्टवयरहरु धेरै कुराले असर गर्छ ।